ह्वात्तै घट्यो डिजेल-पेट्रोलको मूल्य, कति पुग्यो ? हेर्नुहोस ! – Hamrosandesh.com
ह्वात्तै घट्यो डिजेल-पेट्रोलको मूल्य, कति पुग्यो ? हेर्नुहोस !
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले तेलको मूल्य घटाएको छ । कोरोनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको हो ।